Maxaad ka taqaannaa saddexda wasiir ee la magacaabay? - BBC News Somali
Maxaad ka taqaannaa saddexda wasiir ee la magacaabay?
Image caption Axmed Ciise Cawad oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda
Laba wasiir waxay horey xilal uga soo qabteen dowladdii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, balse midka saddexaad waa nin ku cusub siyaasadda oo ganacsade ah.
Halkan ka akhriso taariikhdooda oo kooban:
Axmed Ciise Cawad:
Waa safiirkii Soomaaliya u fadhiyey Maraykanka. Wuxuu wax ku bartay Canada. Ka hor intii uusan noqon safiirka Soomaaliya ee Washinton, wuxu Qaramada Midoobay uga soo shaqeeyey Suudaanta Koofureed. Isaga iyo Juxa waxay ka soo wada jeedaan deegaanada Puntland.
Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye):
Wuxuu ahaa wasiirkii warfaafinta ee xukuumaddii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirnimada ka sokow, wuxuu soo noqday xubin baarlamaan.
Muddo dheer ayuu joogay koofurta, si toos ah iyo si dadbanna uu ugu jiray siyaasadda. Waxay isaga iyo Khadra Axmed Ducaale ka soo jeedaa Burco.
Cabdi Maxamed Sabriye:
Waa injineer ka qalin jabiyey jaamacadda umadda Soomaaliyeed, waana ganacsade. Wuxuu takhasus waxbarasho u aaday 1986 jaamacad ku taalla New castle UK.
Inta badan siyaasadda laguma yaqaanno, waxay isku deegaan yihiin Yusuf Garaad, wuxuuna qaraabo dhow la yahay Cabdiraxmaan cabdi Shakuur oo dowladda uu khilaaf kala dhexeeyo.
Wuxuu dano ganacsi ku leeyahay shirkadda isgaarsiinta ee Nationlink. Dadka yaqaanna waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin qunyar socod ah.
Wararka Xil ka qaadista:
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isbedel ku sameeyay golihiisa wasiirrada, wuxuuna xilalka ka qaaday saddex wasiir.
Warbixinta ka soo baxday xafiiska Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu akhriyay wasiirka warfaafinta waxaa lagu sheegay in xilalka laga qaaday wasiirrada kala ah, Yusuf Garaad (Arrimaha dibadda), Khadra Axmed Ducale (Ganacsiga iyo warshadaha) iyo Cabdi Saciid Faarax (Arrimaha Gudaha).
"Qof saaka iga soo wacay dalka Mareykanka ayaa ii sheegay in xilka la iga qaaday. Ka dibna waxaan telefoon u diray oo aan ka hubsaday Wasiirka Warfaafinta oo aan weydiiyay in warkaas idaacadda Qaranka laga sii daayay. Wuuna ii xaqiijiyay. Ra'iisal Wasaaraha inkasta oo aan wacay iima suurta gelin in aan wadahadalno marka aan daabacayo sadarradan", ayuu yiri Yusuf.
Wuxuu in taa ku daray "Maanta oo ah Khamiis, taariikhdu ay tahay 4-ta January sannadka 2018, aniga iyo Wasiiru Dowluhu waxaan ku daahnay xalay howl uu Ra'iisal Wasaaruhu ii xil saaray in aan maanta soo hor dhigo Golaha Wasiirrada."